Nezvedu - Shijiazhuang Geshuo Trading Co., Ltd.
Tine yemhando yekugadzira zvigadzirwa. Tine timu ine hunyanzvi yekune dzimwe nyika. Isu tine timu inochenjerera yeQuality Control. Hunhu hwebhizinesi redu ndere kugadzira Hwakanakisa Hwenyika nezvose zvatinonzwa nemweya.Tinoshuva kuti dai isu titange iko kwakanaka uye kwenguva refu- kushandira pamwe nekukurumidza.Tinogamuchira kushanya kwako chero nguva!
ZIYIUI chiratidzo chedu chekutengeserana chakanyoreswa muUK & EU.
Kunyoresa nzvimbo Nhamba yekutengesa
Kambani yedu yakapa mvumo kumakambani anotevera kuti ashandise chiratidzo cheZIYIUI pakugadzira nekutengesa zvigadzirwa zvematoyi:
AIHWA Zita rekambani Sale Platform